प्रज्ञाले पूर्णता नपाउँदा थन्कियो १७ करोड - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
प्रज्ञाले पूर्णता नपाउँदा थन्कियो १७ करोड
कृष्ण आचार्य काठमाडौँ मंसिर २७
प्राज्ञिक निकाय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पूर्णता पाउन नसक्दा महत्वपूर्ण काम-कारबाही अलपत्र परेका छन्। कूलपति र सदस्य सचिवको नियुक्ति भएपनि प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद गठन हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट १७ करोड रुपैयाँ थन्किएको छ। साथै, अन्य कुनै पनि विभागीय काम हुन सकेका छैनन्।
२१ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कूलपतिमा गंगाप्रसाद उप्रेती र सदस्य–सचिवमा जगतप्रसाद उपाध्यायलाई नियुक्ति गरेका थिए। तर, अझैसम्म उपकूलपतिलगायत अन्य सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन। यही कारण वार्षिक योजना तथा अनुसन्धानको काम अलपत्र छ। कर्मचारीहरु काम नपाएर फुर्सदिला भएका छन्। रंगरोगन गरेर चिटिक्क पारिएका सदस्यका कार्यकक्षमा कुर्सीमात्र छन्, मान्छे छैनन्।
‘सदस्यहरु नियुक्त नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम चल्नेबाहेक अन्य विभागीय काम हुन सकेको छैन’ सदस्य सचिव जगतप्रसाद उपाध्यायले नेपालखबरसँग भने। हरेकपटक प्रज्ञाबाट चाँडोभन्दा चाँडो सदस्यहरु नियुक्त हुने भनिएको छ। तर, हालसम्मपनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सदस्य सचिव उपाध्यायले पुस पहिलो सातासम्म सदस्यहरु नियुक्त हुने जानकारी पाएका छन्। तर नियुक्त हुने नहुने यकिन छैन।
के-के काम रोकिए?
कला, साहित्य, दर्शन, सामाजिक शास्त्रको अध्ययन तथा प्रोत्साहन गर्ने काम प्रज्ञाले गर्छ। यसका लागि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राज्ञ सभाले पूर्णता नपाउँदै त्यो सम्भव छैन। अर्थात, प्रज्ञाले सैद्धान्तिकरुपमा गर्नुपर्ने कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन्।
प्रतिष्ठानको यसअघिको नेतृत्वले ३३ औँ प्राज्ञसभाबाट चालू आवका लागि १७ करोड बजेट पारित गरेको थियो। त्यसमा सरकारको तर्फबाट १२ करोड र आन्तरिक आयबाट पाँच करोड हुने उल्लेख छ। तर, बजेटको उपयोग तथा परिचालनमा कुनै काम हुन सकेको छैन। सदस्य सचिव उपाध्याय भन्छन्, ‘यो सबै प्राज्ञ सदस्यले गर्ने काम हो, उहाँहरु नै नियुक्त नहुँदा बजेट र कार्यक्रमहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।’
यतिबेला प्रज्ञामा रहेका भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र र दर्शनशास्त्र विभागका कुनै कार्यक्रमतर्जुमा हुन सकेका छैनन्। कूलपति, सदस्य सचिव र अन्य कर्मचारी कार्यालय आउने, हाजिर गर्ने र विभिन्न संघ–संस्था तथा निकायले गर्ने औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएर दिन बिताइरहेका छन्।
अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि कुनै काम हुन सकेको छैन। यसले गर्दा प्रज्ञाको आगामी कार्ययोजना तथा भावी रणनीतिमा नै प्रश्न उठेको छ। प्राज्ञ नियुक्त गर्ने काम माथिल्लो निकायबाट हुने भएकाले यसमा सरकार नै गम्भीर नभएको चर्चासमेत भइरहेको छ।
यस विषयमा कूलपति उप्रेती पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी मातहत एउटा समिति बनेको र तत्काल विज्ञ नियुक्तिको काम सम्पन्न हुने बताउँछन्। ‘प्राज्ञ नियुक्ति गर्न विज्ञको टोली बनेको छ’ उनी भन्छन्, ‘सम्भवतः यसै महिना नभए पुससम्म पहिलो सातासम्ममा केही प्राज्ञको नियुक्ति हुन्छ।’
के हो प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद्?
प्रज्ञामा प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद गरी दुई निकाय हुन्छन्। प्राज्ञ सभा प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय हो। यसले प्राज्ञ परिषदलाई मार्गनिर्देशन गर्ने, निर्देशन दिने, कार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेलगायतका काम गर्छ। यसमा कूलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव, संस्कृति मन्त्रालयका सचव (पदेन सदस्य) र नेपाली कला-साहित्य तथा दर्शनको क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याएका मध्येबाट ३५ जना प्रधानमन्त्रीद्धारा मनोनित हुन्छन्।
प्रज्ञा परिषद् भने कार्यकारी निकाय हो। यसको काम प्राज्ञ सभाका निर्णय कार्यान्ययन गर्ने, निर्देशन पालना गर्ने, गराउने र प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट संचालन गर्ने हो। यसमा कूलपति, उपकूलपति, सदस्य सचिव र प्रधानमन्त्रीबाट विभिन्न विद्या र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आठ जना सदस्य रहन्छन्।
प्रज्ञामा प्राज्ञहरु राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त हुने गरेको भन्दै पटक-पटक नियुक्तिको विषय विवादित बन्ने गरेको छ। ६१ वर्षअघि स्थापना भएको प्रज्ञा पछिल्लो समय निकै आलोचितसमेत हुँदै आइरहेको छ। नियुक्तिको मापदण्ड राजनीतिक संलग्नतालाई बनाइएपछि प्रज्ञालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन आएको छ।
यसपटक प्रज्ञामा कस्ता व्यक्ति नियुक्त हुन्छन् भन्ने पनि धेरैको चासोको विषय बनेको छ।
प्रकाशित २७ मंसिर २०७५, बिहिबार | 2018-12-13 10:20:51